Ihe ngosi ohuru banyere Apple, Steve Jobs na ihe omuma, ihe omuma Apple ohuru, mmeghari nke ndi isi na Cupertino na otutu ndi ozo. Best nke izu na m si Mac
Pedro Rodas kwuru | | Apple, Noticias, ọtụtụ
Ndewo ụmụ okorobịa, nabata na nchịkọta ọhụrụ nke m si Mac.Ọ bụ nke mbụ n'ime ọtụtụ na anyị ga-enye gị n'ime afọ ọhụrụ a ka ị kwụsị ịgụ na jiri uru nke izu ụka anyị na-agwa gị na Sọnde ọ bụla.
Ọ bụ ezie na na Spain enwere ụbọchị ole na ole rue ụbọchị nke Ndị Eze Atọ ahụ, na Europe ndị ọzọ Santa Claus emeworị ọrụ ya. Otú ọ dị, akụkọ banyere ngwaahịa Apple na-eme.
Anyị na-amalite site na akụkọ nke ahụ ahapụbeghị onye ọ bụla Ọ dịkwa ka United Kingdom chọrọ inye akara mmalite iji nwee ike ịgbagha site na ozi dị na ngwaọrụ mkpanaka anyị site na ime ka nnukwu ụlọ ọrụ pụọ, site na iwu, ọnụ ụzọ azụ na sistemụ maka ha. N'ezie, Apple na-emegide usoro ọhụrụ a ma kwe omume.
Nke a bụ akụkọ ... ọ bụ isiokwu nke anyị kwuru maka ya ihe ederede nke American CBS network na mmemme gi 60 nkeji nke enwere ike ịhụ obi Apple na mgbakwunye na ịhụ mkparịta ụka nke ndị isi njikwa Apple dịka Tim Cook, Eddy Cue, Jonathan Ive, wdg. O doro anya na akụkọ kachasị mma m hụworo na ndụ m na Apple. Ọ na-akpọ onwe ya Inside Apple.
Akụkọ ọzọ na-ewu ewu Ọ bụ nke mbụ na Spain nke ihe nkiri ọhụrụ banyere Steve Jobs. Ihe onyonyo ọhụụ a na - ewe nkeji iri abụọ na abụọ na nkeji nke atọ nnukwu ọrụ na ndụ ụlọ ọrụ Cupertino. Dị ka ị maraworị, Danny Boyle na-eduzi ihe nkiri a nke abụọ bụ Danny Boyle, ihe edemede ahụ bụ Aaron Sorokin, nke dabere na akwụkwọ ndụ onye ọrụ nke onye isi ụlọ ọrụ na mbubreyo nke ụlọ ọrụ apụl.
Oge emume ekeresimesi agwula ma Apple amalitela ya mgbasa ozi ọzọ ná mba ụfọdụ. Ọ bụghị n'ezie mkpọsa ọhụrụ ebe ọ bụ na ọ bụ mmeghachi omume nke mkpọsa ahụrịrị n'afọ gara aga, nke a na-akpọ "Bido Ihe Ọhụrụ”. Ọ bụ maka ịmaliteghachi mkpọsa mgbasa ozi na n'oge ahụ gosipụtara ihe ndị enwere ike ịme ngwaahịa Apple site na ọrụ ụfọdụ ndị omenkà ama ama na mba ndị ahụ.
Fewbọchị ole na ole gara aga anyị na-ekwu maka oke nhazigharị nke Apple rụrụ n'ihe metụtara ọkwá ha dị elu. Ha ebipụtawo na ọ ga-abụ onye nọchiri Tim Cook n'onwe ya na ụfọdụ akụkụ nke ndị isi Apple ebilila.
Johny Srouji bụ otu n'ime ndị ahụ nwere ihu ọma ma bụrụ onye isi ọhụụ maka ụlọ ọrụ Cupertino. Ọ bịakwutere Apple na 2008 mgbe ọ rụsịrị ọrụ na ụlọ ọrụ dịka Intel ma ọ bụ IBM ka ọ bụrụ onye na-ahụ maka imepụta ihe nhazi nke oge ahụ, A4. Ugbu a Apple ekpebie inye ya nde dollar iri na ụlọ ọrụ amachibidoro ụlọ ọrụ.
Anyị kwụsịrị mkpokọta na akụkọ ahụ kwuru na -eji noo na Apple dị iche iche isiokwu ndị na-ama a kpochapụwo na Apple Store na N'ezie ụkpụrụ nduzi na Steve Jobs mere ewu "The obe n'etiti nkà na ụzụ na-emesapụ aka nkà" agaghị na-erughị na nke a oge.
Ọ bụ n'ihi nke a na ọnwa na-abịa Apple ga-amalite na ụlọ ọrụ gọọmentị ya dị iche iche foto na art noo iji nyere ndị ọrụ na-ese ihe okike aka na ndị nwere mmasị na foto ị nweta ọtụtụ usoro ha.
Na-atụghị anya, anyị na-eche gị na Sọnde na-esote yana ozi ndị ọzọ gbasara ụwa Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ihe ngosi ohuru banyere Apple, Steve Jobs na ihe omuma, ihe omuma Apple ohuru, mmeghari nke ndi isi na Cupertino na otutu ndi ozo. Best nke izu na m si Mac
The iPhone 7 Plus ga-abịa ruo 256GB na batrị 3100 mAh
Nke a abụrụla nke ikpeazụ m ga-achọta ihe ọhụụ 12 nke anụ ọhịa MacBook m